မြန်မာတို့ရဲ့ချစ်စရာ ဓလေ့ ရှင်ပြု နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မြန်မာတို့ရဲ့ချစ်စရာ ဓလေ့ ရှင်ပြု နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ
မြန်မာတို့ရဲ့ချစ်စရာ ဓလေ့ ရှင်ပြု နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ
Posted by manawphyulay on Sep 4, 2011 in Local Guides, Photography | 11 comments
ချစ်စရာ မြန်မာတို့ရဲ့ အစဉ်အလာ မမေ့သင့်တဲ့ဓလေ့တစ်ခု
မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့စရိုက်ဖြစ်တဲ့ သားသမီးတွေကို သာသနာ့ဘောင်ထဲ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာ မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာ အမူအကျင့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပုံလေးတွေကတော့ ကျွန်မတို့အညာဒေသတစ်ခုရဲ့ အလှူမင်္ဂလာ ရှင်ပြု၊ နားသပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောကီမင်္ဂလာ ၁၂ ရက်မှာ နာမည်ပေးခြင်း၊ နေပြခြင်း၊ ကွမ်းစတဲ့ ၁၂ ရပ်ပါပါတယ်။ ရှေ့မင်းတွေလက်ထက်ထဲက လုပ်ခဲ့တဲ မင်္ဂလာထဲက
အမျိုးသမီးဆို နားထွင်းတဲ့ မင်္ဂလာပါပါတယ်။ ခုချိန်တိုင် ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း မပျက်မကွက် ကျင်းပလာကြတာဆိုရင်ဖြင့် အတော်ကို သာသနာတော်အတွက်လည်း တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာ့ အသွင်အပြင် အစဉ်အလာကတော့ ဘယ်သူမှ မြန်မာကို မယှဉ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာ ရိုးရာ ဓလေ့ ရှင်ပြုပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွာဓလေ့ရဲ့မြင်ကွင်းကို အလှူမဏ္ဍပ်အတွင်း မြင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ပြုပွဲရဲ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုး အမြင်ဆန်းတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့အတူ လှည့်လှယ်ပုံမြင်ကွင်းတွေ မြင်တွေ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူ့ဒကာနဲ့ အလှူအမက ရှေ့ဆုံးက တန်းစီးပြီ ရွာတစ်လျှောက် လှည့်လည်ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာလို့လည်း ခေါ်လို့ရသလို တကယ့် မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာဓလေ့စရိုက်တစ်ခုလည်း ကာလကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေစေမိပါတယ်။
ဒိုးပါတ် အိုးစည် ၀ိုင်းလဲမပါဘူးထင်တယ်
ဒီလို ရှင်ပြု နားသ လှည့်လည်တာ
ဘယ်ရွာမှာလဲ ဟ င်..
စာဥလဲ မတွေ့ မိပါလား
သဂျီးပြောတဲ့ ခိုးငွေ့ သူငယ် ဆိုတာတွေ့ ပြီ
ရှင်ပြုရင် အဲလို သောက်လို့ ရတာလား..ဟင်
ပတ်ဗေထုံ …. ပတ်ဗေထုံ ။ အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့ ….. အနောက်ကိုတဲ့ …….. မျှော်လိုက်ရင် …… တံခွန်တိုင် ရွှေကုက္ကားနဲ့ …. ဘုရားလေး လေ … ဘုရားလေး လေ .. ဘုရားလေး ……. ကိုမြင် … ။ ပုံလေးတွေမြင်ရတော့ ရှင်ပြုပွဲ သီချင်းလေး ပြန်သတိရမိတယ် ။ စိတ်ကြည်နူးစရာပါပဲ ။ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်မသွားအောင်တော့ အားလုံးကြိုးပမ်းရမှာပဲလေ ။
Good pictures of Myanmar’s lovely traditional noviation ceremony!
How lovely and pleasant to see such rare village Myanmar tradition !
I love and adore our simple village Myanmar’s culture.
Thanks for sharing such rare and wonderful pictures.
While I viewing yr pictures,I also feel proud of beingaMyanmar
အညာနေပူဒဏ်အောက်က အလှုမင်္ဂလာပွဲလေးကိုတွေ့ ရတော့ ဦးဖိုးကျားရဲ့ မိတဆိုးရှင်ပြုကိုသွားသတိရမိပါတယ်ရှင်။ခုတော့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ အလှုရှင်မိသားစုကိုတွေ့ ရတော့
တော်တော် တန်ဘိုးရှိတဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ။
အဲဒီအလှူက ငှားထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကလဲ မဆိုးဘူးပဲ။ ရွှေမိုးငွေမိုးရွာမယ့် မိန်းကလေးမျက်နှာ ဆံပင်အုပ်မိနေတာတခုပဲ။
ရှင်လောင်းလေး စီးကရက်သောက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးက မြင်းထိန်းတဲ့သူက ဓါတ်ပုံရိုက်မှာမို့ သူ့စီးကရက်ကို ကိုင်ပြီး ပိုစ့် လုပ်ခိုင်းထားတာဖြစ်မှာ။ မီးလဲ မညှိထားဘူးမဟုတ်လား။
ဒါက ဘုရားရှင် အလိုတော်ကျ ရှင်ပြုနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီရှင်လောင်းလေးတွေ ကိုရင်ဝတ်ပြီးရင်လဲ ဘာမှမလုပ်ပဲ တပတ်ဆယ်ရက်နေရင် ပြန်ထွက်မှာမို့ သာသနာတော်အတွက်လဲ သိပ်အကျိုးမများပါဘူး။ ရှင်လောင်းမိဘများဟာလဲ အဲဒီရှင်ပြုရဲ့ ရေစက်ချတဲ့အခါ ဘုန်းကြီး(မဖြစ်မနေ)ထည့်ဟောမှာလို – သာသနာ့ အမွေခံတွေ လုံးလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ ဆိုင်ရာ ဒါနကုသိုလ် သီလကုသိုလ်များတော့ လူအပေါ်လိုက်ပြီး ရမှာပေါ့လေ။
ဒါက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ ယနေ့တိုင် ကျန်နေသေးတဲ့ နေထိုင်မှု့ပုံစံထဲက အင်မတန်ချစ်စရာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပွဲတွေအတွက် ငွေတွေကုန်တယ် အချိန်တွေကုန်တယ် လူတွေပင်ပန်းတယ် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်တွေ အနည်းနဲ့အများထိခိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေနဲ့တန်အောင် – တန်ရုံမက ပိုလို့တောင် အကျိုးများပါတယ်။
စာဥက ကျနော်နဲ. လူတွေစိတ်ပြောင်းနေတုန်း
ဘကြီးစံ ကောက်ရိုး ပုံပေါ် ရောက်နေတယ်ဗျ
ရွာတုန်းက မြင်းပေါ်က လိမ်.ကျဖူးတယ် အလှူမှာ သတိရတယ်
Manaw တို့ရွာလား ။
Which one is Ma Naw Phyu Lay ??? Which colour ???
“Kun Daung Kai” or “Pann Daung Kai” or with silverware (Bowl)
ပေါက်ပေါက်ပွင်. ကြဲတာက သုံးယောက်ကြဲရတာမလား မိန်းကလေးနှစ်ဦးကြားကို ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် နေရတယ်နော် ကျနော်တို.ရွာတွေမှာတော.
ဒါပေမယ့် တောသူဌေး အလှူ နော်။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ နားသ တာ ကားနဲ့လှည့်တယ်ပေ့ါ။
အခုလို တင်ပေးတော့လည်း ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲလာပုံတွေကို မြင်ရတွေ့ရတာပေ့ါ နော်။